တပျမတျောအတှကျဆိုရငျ ကွိုကျတဲ့တာဝနျပေး ထမျးရှကျမယျဆိုတဲ့ တပျခဈြသူလေး ယဥျလတျ – Shwe Thadin
မဂျလာပါ…ပရိသတျကွီးရတေပျခဈြသူ မငျးသမီး ယဥျလတျကို အရငျလိုဝဖေနျဆဲဆို ပွောခငျြတိုငျး ပွောလို့ မရတော့ဘူးနျော…အမြိုးသမီး သရုပျဆောငျတှထေဲမှာ အထိုးအကွိတျ အပိုငျနိုငျဆုံး သရုပျဆောငျ လို့ ပွောလိုကျ တာနဲ့သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ယဥျလတျကို ပဲ ပွေးမွငျမိကွမှာပါ။
သရုပျဆောငျ ယဉျလတျဟာဆိုရငျ စဈတပျထောကျခံအားပေးသူဖွဈတာကွောငျ့ပွညျသူမြားမှ social Punishment လုပျခွငျးခံနရေသူဖွဈပါတယျ။ ယဉျလတျကဘယျလောကျပဲ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှေ ရှိနပေါစေ ဂရုမစိုကျဘဲ အေးဆေးစှာနဲ့ သူမလုပျစရာရှိတဲ့အလုပျတှကေို
ဆကျလကျလုပျကိုငျနတောပဲဖွဈပါတယျနျော။ သူမပွောထားတာကတော့ သူမကိုဝဖေနျနတေဲ့ငပိနျးတှကေို အနီကောငျတှသေိစခေငျြတာကသူမဟာ ဘယျနရောကတာဝနျထမျးဆောငျရပါစနေိုငျငံအတှကျ တပျမတျောနဲ့အတူ ထမျးဆောငျနိုငျပါတယျလို့ဆိုပါတယျ။
တကယျလဲလုပျပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ သူမရဲ့ပုံတှနေဲ့သတငျးအခြို့တကျလာတာလဲရှိပါတယျ။ အဲ့တော့ သူမဟာ ဘယျလိုရာထူးတာဝနျမဆိုထမျးဆောငျနိုငျကွောငျးနဲ့အနီခဈြသူတှမေရှိလဲ တပျမတျောက အေးဆေးစှာ နိုငျငံအတှကျ ဆကျလကျထိနျးသိမျးတာဝနျယူနိုငျကွောငျးဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျအမြားစုကတော့ ယဉျလတျရဲ့လုပျရပျတှကေို အပွငျးအထနျရှုတျခနြပွေီး ဝဖေနျနကွေပါတယျ နျော…ဒီတဈခါမှာဆိုရငျတော့ ယဉျလတျတဈယောကျ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုဒဏျတှကေို အလူးအလဲ ခံ နေ ရတာဖွဈပါတယျ။
သူပွောနတေဲ့ si ဆိုတဲ့ ခဈြစနိုးနဲ့ ချေါနတေဲ့ သူဆိုတာ အရငျကလူပွောအရမျးမြားဖူးတဲ့တပျ ခဈြသူ ခနျ့စညျသူမြား ဖွဈနမေလားဆိုတာတော့? နောကျဆို ပရိတျသတျကွီးလညျး တဈခုခုပွောတော့မယျ ဆိုအတိုငျခံရနိုငျတာမို့ သတိထားဆငျခွငျနိုငျအောငျ တငျပေးလိုကျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ခဈြသူနဲ့ ပွောထားတဲ့ မှတျတမျးကိုလညျး ယဉျလတျရဲ့ story မှာ တငျထားပါတယျနျော။ စဈ တပျ ထောကျခံအားပေးလို့ တိုကျခိုကျခံနရေတဲ့ ယဉျလတျ အတှကျပွောခငျြတဲ့စကားမြားရှိခဲ့ပါက ကှနျမနျ့ တှငျ ရေးထား ခဲ့ကွပါဦးနျော…
မဂ်လာပါ…ပရိသတ်ကြီးရေတပ်ချစ်သူ မင်းသမီး ယဉ်လတ်ကို အရင်လိုဝေဖန်ဆဲဆို ပြောချင်တိုင်း ပြောလို့ မရတော့ဘူးနော်…အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်တွေထဲမှာ အထိုးအကြိတ် အပိုင်နိုင်ဆုံး သရုပ်ဆောင် လို့ ပြောလိုက် တာနဲ့သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ယဉ်လတ်ကို ပဲ ပြေးမြင်မိကြမှာပါ။
သရုပ်ဆောင် ယဉ်လတ်ဟာဆိုရင် စစ်တပ်ထောက်ခံအားပေးသူဖြစ်တာကြောင့်ပြည်သူများမှ social Punishment လုပ်ခြင်းခံနေရသူဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်လတ်ကဘယ်လောက်ပဲ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ ရှိနေပါစေ ဂရုမစိုက်ဘဲ အေးဆေးစွာနဲ့ သူမလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကို
ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ သူမပြောထားတာကတော့ သူမကိုဝေဖန်နေတဲ့ငပိန်းတွေကို အနီကောင်တွေသိစေချင်တာကသူမဟာ ဘယ်နေရာကတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါစေနိုင်ငံအတွက် တပ်မတော်နဲ့အတူ ထမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တကယ်လဲလုပ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ပုံတွေနဲ့သတင်းအချို့တက်လာတာလဲရှိပါတယ်။ အဲ့တော့ သူမဟာ ဘယ်လိုရာထူးတာဝန်မဆိုထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်းနဲ့အနီချစ်သူတွေမရှိလဲ တပ်မတော်က အေးဆေးစွာ နိုင်ငံအတွက် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းတာဝန်ယူနိုင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်အများစုကတော့ ယဉ်လတ်ရဲ့လုပ်ရပ်တွေကို အပြင်းအထန်ရှုတ်ချနေပြီး ဝေဖန်နေကြပါတယ် နော်…ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်တော့ ယဉ်လတ်တစ်ယောက် ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုဒဏ်တွေကို အလူးအလဲ ခံ နေ ရတာဖြစ်ပါတယ်။
သူပြောနေတဲ့ si ဆိုတဲ့ ချစ်စနိုးနဲ့ ခေါ်နေတဲ့ သူဆိုတာ အရင်ကလူပြောအရမ်းများဖူးတဲ့တပ် ချစ်သူ ခန့်စည်သူများ ဖြစ်နေမလားဆိုတာတော့? နောက်ဆို ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း တစ်ခုခုပြောတော့မယ် ဆိုအတိုင်ခံရနိုင်တာမို့ သတိထားဆင်ခြင်နိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူနဲ့ ပြောထားတဲ့ မှတ်တမ်းကိုလည်း ယဉ်လတ်ရဲ့ story မှာ တင်ထားပါတယ်နော်။ စစ် တပ် ထောက်ခံအားပေးလို့ တိုက်ခိုက်ခံနေရတဲ့ ယဉ်လတ် အတွက်ပြောချင်တဲ့စကားများရှိခဲ့ပါက ကွန်မန့် တွင် ရေးထား ခဲ့ကြပါဦးနော်…